အညစ်အကြေးနဲ့ဆဲလ်သေတွေကို အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပြီး ဖြူစင်ချောမွေ့သွားစေမယ့်…. | CosmeticMyanmar
Home » Article » အညစ်အကြေးနဲ့ဆဲလ်သေတွေကို အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပြီး ဖြူစင်ချောမွေ့သွားစေမယ့်….
အညစ်အကြေးနဲ့ဆဲလ်သေတွေကို အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပြီး ဖြူစင်ချောမွေ့သွားစေမယ့်….
ခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီဥတုမှာ 🤧 🤧 🤧 နေ့စဉ်အလုပ်သွား ၊ ကျောင်းသွားနဲ့ဆိုတော့ 🙄 🙄 🙄 မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အဆီ ၊ အညစ်အကြေးနဲ့ ဖုန်မှုန့် ၊ သဲမှုန့်တွေကပ်ငြိတွယ်လာတတ်ပါတယ်။ 😵 😵 😵 ဒါတွေကိုနေ့စဉ်သန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရင် ပြဿနာမရှိပေမယ့် 🙅‍♀️ 🙅‍♀️ 🙅‍♀️ ကိုယ်သုံးတဲ့ Facial Foam ကအသားအရေအတွင်းပိုင်းထိ မသန့်စင်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ 🤷🏾‍♂️ 🤷🏾‍♂️ 🤷🏾‍♂️ မျက်နှာအသားအရေပေါ်မှာ အညစ်အကြေးတွေစုပုံလာပြီး ဝက်ခြံတွေ ၊ အမဲစက်တွေနဲ့ ဆဲလ်သေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ 🤔 🤔 🤔 ဒါကြောင့် Cosmetic Myanmar ကနေ အသားအရေကိုအထိရောက်ဆုံး သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ SK Herbal တံဆိပ် Whitening Mousse Foam လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ 📣 📣 📣
SK Herbal တံဆိပ် Whitening Mousse Foam လေးဟာ 😍 😍 😍 အရေပြားအတွင်းထဲထိသန့်စင်ပေးပြီး အသားအရေကို ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ 💪 💪 💪 အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး 🤲 🤲 🤲 အမဲစက်တွေကိုအထိရောက်ဆုံးလျှော့ချပေးနိုင်လို့ 👎🏽 👎🏽 👎🏽 အသားအရေကိုဝင်းပကြည်လင်လာစေပါတယ်။ မျက်နှာအသားအရေပေါ်က အညစ်အကြေးများနဲ့ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးတာကြောင့် အသားအရေကို ချောမွေ့ဖြူစင်နုပျိုစေပါတယ်။ 🤩 🤩 🤩
ပျားရည် ၊ ချယ်ရီပန်းအဆီအနှစ် ၊ လက်ဖက်စိမ်းအဆီအနှစ် ၊ လီလီပန်းအဆီအနှစ် ၊ ကြာပန်းအဆီအနှစ် ၊ ချာမိုမိုင်းပန်းအဆီအနှစ် ၊ စံပယ်ပန်းအဆီအနှစ် ၊ နှင်းဆီပန်းအဆီအနှစ်စတဲ့ 🌺 🌸 🌹 💐 🥀 သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်မှာလုံးဝစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ❌ ❌ ❌ သုံးစွဲပုံကတော့ စိုစွတ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ SK Herbal တံဆိပ် Whitening Mousse Foam လေးကိုအနှံ့လိမ်းပြီး ညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးရပါမယ်။ 💆🏽‍♂️ 💆🏽‍♂️ 💆🏽‍♂️ မနက်နဲ့ည တစ်ရက်ကိုနှစ်ကြိမ်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ 😚 😚 😚 နေ့စဉ်မပြတ်သုံးစွဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အညစ်အကြေးကင်းစင်ပြီး ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာအသေအချာပါပဲနော်။ 🤩 🤩 🤩
Image Source : www.facebook.com/skherbal